Tsaho isan-karazany milaza fa afaka mividy Fitbit | i Google Androidsis
Nandritra ny fampisehoana ireo vokatra Google vaovao, ny 15 Oktobra, antenaina ny fampisehoana ny Pixel Watch, ny smartwatch voalohany avy amin'ny orinasa monina Mountain View. Na izany aza, toy ny tamin'ny taona lasa, tsy nisy famantaranandro marani-tsaina natolotra.
Ny tsaho farany milaza izany Google dia mifampiraharaha handray ny orinasa Fitbit, iray amin'ireo orinasa smartwatch izay manandrana mijoro amin'ny Apple Watch sy ireo fehin-tànana isan-karazany ankehitriny eny an-tsena amin'ny alàlan'ny serivisy serivisy tena mahaliana.
Volana vitsivitsy lasa izay, Google dia nanao fifanarahana tamin'i Fossil mba hahazoana ampahany amin'ny haitao an'ity mpanamboatra ity, izay toa manondro fa ny orinasa ao an-tsaina ny handefa smartwatch, na izany aza, dia toa tsy hitranga izao, farafaharatsiny amin'ity taona ity.
Misy dikany ny tsaho momba ny fividianana Fitbit an'i Google, satria anisan'ny i Fitbit ireo mpanamboatra telo izay mivarotra ny smartwatches indrindra manerantanyIzany hoe, raha tsy mampiasa Wear OS, ny rafitra fiasa Android ho an'ny smartwatches.
Mety ny hevitr'i Google dia ny hiditra ao amin'ity tsena ahazoam-bola ity miaraka amina mpanamboatra efa niorim-paka ary tato ho ato dia tsy mandany fotoana be ara-bola. Tsy vao voalohany na farany no mividy orinasa na serivisy miasa amin'ny tsena i Google miafara amin'ny fanidiana azy na fivarotana azy ho an'ny ampahany, toy ny nataony tamin'ny Motorola rehefa namidiny tamin'i Lenovo, mitazona ireo patanty izay nosoratan'ny orinasa nandritra ny taona maro.
Azo inoana fa Ny fikasan'i Google dia mitovy amin'ny Fitbit ary ny hany antony manosika dia ny mahazo ny patantiny hampivelatra ny smartwatches azy ireo tantanan'ny Android fa tsy ny rafitra fiasa Fitbit.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Tsaho isan-karazany milaza fa afaka mividy Fitbit i Google
Ny Huawei Mate 30 dia ho tonga any Eropa amin'ny volana ambony
Mamorona sy milalao ny tranomaizin'ny hafa amin'ity hetsika RPG malaza antsoina hoe Monolisk ity